Top 5 Free Photo Ịhazi Software ka ịhazi foto gị
> Resource> Free> hazie foto gị na Best Free Photo Ịhazi Software
Mgbe i nwetara nza nke photos, ị ga-mkpa ụfọdụ foto management software iji hazie na ịkọrọ gị dijitalụ photos mma. Ebe a kacha mma 5 free foto Ịhazi software na-atụ aro ka ị hazie foto gị. Ndị a foto Ịhazi software ga-enyere gị ndokwa photos n'ime nchekwa, ịkpado ha, na-eme ka ha ụzọ na-amasị gị.
Free Photo Ịhazi Software 1. FastStone Image onyenlereanya
FastStone Image onyenlereanya bụghị nanị ezi free image Ọhazi, kamakwa ihe oyiyi nchọgharị, Ntụgharị na nchịkọta akụkọ. Ọ nwere ọtụtụ oké atụmatụ dị ka red-anya mwepụ, foto tụnyere, resizing, cropping, foto agba ukpụhọde, wdg All ewu ewu image formats dị ka BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA, wdg na igwefoto dijitalụ Raw formats (DRG, CR2, MRW, ORF, SRF, NEF, PEF, RAF, na CRW) na-akwado site na nke a free image ahazi software.
Free Photo Ịhazi Software 2. Google Picasa
Google Picasa bụ nnọọ ọtọ free foto Ọhazi inyere gị aka ịchọta niile ị photos na idozi foto n'ime albums. E wezụga, ụfọdụ foto edezi atụmatụ dị ka agba mgbazi, ngosi mmịfe Ndinam, wdg na-nyere. Picasa nwekwara ike hazie gị ihe oyiyi ndị na ihu. Ọ iwekota ọba weebụ na online foto nkekọrịta mere na ị nwere ike mfe ịkọrọ gị foto na foto albums ezinụlọ na ndị enyi.
Free Photo Ịhazi Software 3. Xnview
Xnview-enyere gị ele, hazie na tọghata foto gị mfe na ngwa ngwa. Ya nke ọma na-akwado ihe karịrị 500 faịlụ formats na ike tọghata photos na-ewu ewu image usoro dị GIF, BMP, jpg, PNG, wdg Ụfọdụ ndị ọzọ atụmatụ dị ka Web peeji e kere eke, na kọntaktị Mbipụta, multiple akakabarede (Ọkpụkpọ na mgbanwe), slide na-egosi, na ihuenyo akada, wdg-eme ka ọ dị elu ndị ọzọ. Nke a free foto Ọhazi e mere tumadi n'ihi na elu foto ọrụ.
Free Photo Ịhazi Software 4. Windows Live Photo Gallery
Na Microsoft Windows Live Photo Gallery, ị nwere ike tinye ụfọdụ isiokwu mkpado, Fim, captions, wdg gị photos mere na ị pụrụ ngwa ngwa ahụ ha mgbe e mesịrị. E wezụga, ụfọdụ mfe na-eji foto edezi ngwaọrụ dị ka ikpughe, agba, sharpness mgbanwe, foto cropping, red-anya mwepụ, wdg na-nyere mma foto retouching. Ọ dịkwa nnọọ mfe maka gị ka email, na-ebipụta ma ọ bụ ibipụta foto gị.
Free Photo Ịhazi Software 5. JetPhoto Studio
JetPhoto Studio-enyere gị aka hazie gị dijitalụ foto site na ndetu, Keywords, oge na ebe. Wezụga ya, ọ integrates GPS technology aka ịchọta na njikọ foto na Obodo map. Ụfọdụ foto edezi ọrụ dị ka cropping, resizing, na-agbakwunye watermarks, eke foto ngosi mmịfe, wdg na-awa.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere nza nke photos, ị pụrụ ime ka a foto DVD ngosi mmịfe ka mma chebe na ịkọrọ gị foto echeta na a ngosi mmịfe software. Free download ya ikpe mbipute ebe a: